Work Ebe ọrụ Google na - enweta Nnukwu Mmelite Maka Mpi Na Microsoft 365 - Comp Comparison】
Google Workspace na-enweta nnukwu mmelite iji soro Microsoft 365
Y’oburu n’icighariri igbalite na atụmatụ Google Workspace akwụrụ ụgwọ, I nwere ihu ọma n’ihi na Google kwupụtara na wọkspeesi dịịrị ndị ọrụ niile.
Malite taa, onye ọ bụla nwere akaụntụ Google ga-enwe ike ịnweta ahụmịhe Google Workspace zuru ezu, gụnyere Gmail, Nkata, Kalinda, Drive, Docs, Sheets, Meet, na ndị ọzọ, dị ka nyocha nke nnukwu weebụ na-enye "Google Workspace for everyone" dị ka ọhụrụ blog post.
Google kwuputakwala ọtụtụ ọhụụ ọhụụ ga - eme ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịnyagharịa ụwa nke ngwakọ, gụnyere mgbanwe nke ime ụlọ dị na Google Chat to Spaces, ndenye aha ọhụrụ maka Google Workspace, nkwalite ọhụụ na - akwado nkwado na Google. Izute na njirimara nzuzo na nzuzo na Google Workspace.
Onye osote onye isi na onye isi nchịkwa Google Workspace, Javier Soltero, kọwara otú ọrụ ọhụrụ ndị a ga-esi kwado mmekorita nke ndị ọrụ nke ngwaahịa ụlọ ọrụ na ndụ ha kwa ụbọchị:
“Imekọ ihe ọnụ anaghị akwụsị n’ebe ọrụ - ngwaahịa anyị ejirila nke kachasị mma maka njikọta, ịkekọrịta, na ojiji site na mbido. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ inye ndị na-azụ ahịa, ndị ọrụ, ndị nkuzi, na ụmụ akwụkwọ ezigbo ụzọ maka imekọ ihe ọnụ, ebe anyị na-enye mgbanwe nke na-enye ndị ọrụ dị iche iche a ohere ịnabata ụzọ nke nkwukọrịta na nkwukọrịta.
Oghere ọrụ Google maka mmadụ niile
N'adịghị ka Microsoft 365, nke chọrọ ndenye aha, Google Workspace dị ugbu a nye onye ọ bụla nwere akaụntụ Google, nke pụtara na ndị enyi, ezinụlọ, ma ọ bụ ụdị ọ bụla nwere ike ịnwe njikọ, rụọ ọrụ ọnụ, ma kesaa ozi bara uru n'ebe ọ bụla.
Ọ bụ ezie na ngwanrọ ngwanrọ ịntanetị nke Google dị ugbu a maka ndị ọrụ ndị ọzọ, ịnwekwara ike ịgbasa ọrụ ya site na ịdebanye aha maka atụmatụ Otu Workspace. Onyinye onyinye ohuru a na-enye ihe di iche iche dika oru nleba anya nke oma, mkparịta ụka vidiyo ọkachamara, na ozi email ahaziri iche, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ịgbasa ya n'ọdịnihu.
Google na-eme ka ịkpọ oku vidiyo na-emekọrịta ihe na Google Meet site na ịgbakwunye ọnọdụ ndị enyi na vidiyo mkparịta ụka vidiyo ya. Site na ọnọdụ enyi, onye ọ bụla na-eso nzuko nwere ike ịnweta atụmatụ yana njikwa dị ka ntuli aka, nkata nzuko, aka aka, Q&A, nkọwa ndụ, na ndị ọzọ. Iji maa atụ, ndị ọrụ ibe nọ n'otu ime ụlọ nwere ike ịgbanye ọnọdụ ndị enyi na ngwaọrụ nke aka ha iji nye ha ntaneti vidiyo ha nke nzute.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ na mbugharị site na G Suite na Google Workspace bụ nnukwu ihe, ọkwa ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ dị mkpa karịa n’ihi na ọ ga-ahụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ngwa ọrụ ya na ọrụ ha ekwukọrịta ma rụkọta ọrụ na ntanetị.